first microfinance laghubitta bittiya sastha(first microfinance laghubitta bittiya sastha) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
first microfinance laghubitta bittiya sastha
कोरोना संकटबीच फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको खुद नाफामा बढोत्तरी
काठमाण्डौ। विश्व महामारी कोरोनाभाइरसको संकटका बाबजुद फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रैमासमा खुद नाफा बढाउन सफल भएको छ। संस्थाले अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको तुलनामा ५.४७ प्रतिशत खुद नाफा बढाउन सफल भएको हो। संस्थाको आइतबार सार्वजनिक चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार खुद नाफा १३ करोड...
काठमाण्डौ । फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा खुद नाफा घटेको छ। संस्थाले सार्वजनिक गरेको तेस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाले ८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले ९ करोड १८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। यो हिसाबले संस्थाको खुद...
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सले सार्वजनिक गर्यो दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरण, यस्तो छ अवस्था
काठमाण्डौ । फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको तुनालमा चालु आर्थिकको दोस्रो त्रैमासमा १८.८५ प्रतिशतले खुद नाफा बढाउन सफल भएको छ । संस्थाको दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले खुद नाफा ६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ आर्जन गर्न सफल भएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५ करोड ६३ लाख...
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको वार्षिक साधारणसभा असोज २८ गते, मुख्य अजेन्डाहरु यस्ता छन्
काठमाण्डौ । प्रस्तावित लाभांश पारित गर्ने मुख्य अजेन्डासहित फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो दसौँ वार्षिक साधारणसभाको मिति, समय र स्थान तोकेको छ । संस्थाको सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभाको मिति, समय र स्थान तोकेको हो । संस्थाले यही असोज २८ गते साधारणसभा गर्ने निर्णय गरेको छ ।...
फ्रस्ट माइक्रोफाइनान्स पनि मर्जरमा जाने !
काठमाण्डौ । फ्रस्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था समेत मर्जरमा जाने भएको छ। यो कम्पनीले संभावित मर्जर तथा प्राप्तिका लागि भन्दै एक समिति गठन गरेको नेप्से तथा धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी गराएको हो । कम्पनीको साउन २७ गते बसेको संचालक समितिको १५४ औं बैठकले विवेकमानसिंह शाक्यको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय मर्जर तथा प्राप्ति...
फ्रस्ट माइक्रोफाइनान्सद्वारा १७.८९४७% लाभांश वितरणको घोषणा
काठमाण्डौ । फ्रस्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १७.८९४७ प्रतिशत लाभांश वितरणको घोषणा गरेको छ । कम्पनीको साउन २७ गते बसेको संचालक समितिको १५४ औं बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वितरणयोग्य मुनाफाबाट लगानीकर्तालई १७ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.८९४७ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको निर्णय...
फस्ट माइक्रोफाइनान्सको नाफामा ३१.३१% को वृद्धि, रिजर्भमा छलाङ
काठमाण्डौ । फस्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमासिकमा अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको तुलनामा ३१.३१ प्रतिशत खुद नाफा बढाउन सफल भएको छ । कम्पनीको बिहीबार सार्वजनिक चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन (लेखापरीक्षण हुन बाँकी) अनुसार खुद नाफा रु १३ करोड ३२ लाख रहेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रु १० करोड १४...
लाभांश घोषणामा पनि फ्रस्ट भो फ्रस्ट माइक्रोफाइनान्स !
काठमाण्डौ । हरेक त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशनमा पहिलो हुँदै आएको फ्रस्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लाभांश घोषणामा समेत फ्रस्ट नै भएको छ । यो कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई १२.६३१६ प्रतिशतको दरले नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । यो लघुवित्त कम्पनीको साउन २१ गते दिउँसो ३ बजेपछि बसेको १४० औं बैठकले आर्थिक वर्ष...